Download tost maka Windows Alternative Mee DVD Movies
> Resource> Windows> Download Best tost maka Windows Alternative maka 8/7 / Vista / XP
Tost bụ nile-na-otu media Toolkit maka Mac na-kere site Roxio. Tost mbụ e wepụtara na January 2009. Ugbu a ọhụrụ version bụ 11. Ọ-enye gị ohere ime ihe ọ bụla iji tọghata ma na-eso media. Ma ihe dị otú ahụ magburu onwe ngwa adịghị arụ ọrụ na ma Windows 7, Vista, ma ọ bụ XP. Kedu ụdị ihe nwute bụ nke a! Ọ bụrụ na ị bụ onye na tost onye ọrụ, ma ọ bụ mmasị site na ike nke tost, ị chọrọ tost Ẹkot maka Windows.
Ekele! Ị na-nri ebe. Anyị na Wondershare nwere ike ikwu Video Ntụgharị maka Windows 8/7 / Vista / XP / 2000. Ọ nwere yiri atụmatụ dị ka tost, na-abịa na sara mbara nkwado maka niile ewu video formats, na-edegharị DVD, Ndekọ video, nbudata online video, nkwado maka niile obere ngwaọrụ, na ndị ọzọ. Ọ bụ ndị kacha niile-na-otu video na DVD ngwọta maka Windows.
Ntak emi Họrọ tost maka Windows Alternative
N'ezie, i nwere ike na-eche maka ukara ntọhapụ nke Roxio tost maka PC. Ma m na-ahụbeghị a zubere oge ọ bụla. N'okpuru ebe bụ isi atụmatụ nke anyị na-atụ aro tost maka Windows ọzọ. Ị ga-enye ya a na-agbalị? Download tost Windows Ẹkot ugbu a.
Tọghata na ọkụ ọ bụla video na Windows 8/7 / Vista / XP
The tost maka Windows Ẹkot-akwado ndị niile na-ewu ewu video formats na-eji site ebudatara video, camcorder video, iPhone video, wdg Ihe ọ bụla na akpa format bụ, ị nwere ike mgbe niile mbubata ka Video Converter Ultimate iji tọghata na ọkụ na-DVD enweghị ihe ọ bụla hassle. The akwado video formats na-agụnye ma na ọnweghị oke MOV, MP4, M4V, AVI, FLV, WMV, 3GP, ASF, MKV, MOD, AVCHD, RMVB, wdg
Ọzọkwa, ọ na-enye gị ohere kpọmkwem idekọ vidiyo si na video akada ngwaọrụ ma ọ bụ online video saịtị dị ka YouTube. High definition videos na-akwado.
Extraordinary DVD ahụmahụ
Ị na-kacha ụzọ ọkụ gị dijitalụ media ka DVD na elu àgwà. Ma DVD5 (4.7G) na DVD9 (sọrọ-oyi akwa, 7.9G) na-akwado. I nwekwara ike ọkụ video ka DVD nchekwa, ma ọ bụ ISO faịlụ na free nyere DVD menu ndebiri mee ka gị na DVD pụrụ iche.
Share videos n'ebe ọ bụla
Ọ dịghị mkpa ịchọ gburugburu n'ihi na ihe video formats ndị kwesịrị ekwesị maka ngwaọrụ gị. Ruo 100 na ngwaọrụ na-n'ụzọ zuru ezu na-akwado. Ị nwere ike mgbe ahụ a preset profaịlụ maka ngwaọrụ gị. Họrọ ya na tọghata video na na na ngwaọrụ ọ bụla ị chọrọ.
Tọghata ọ bụla 2D video ka 3D na ala
Ọ bụrụ na ị 3D enthusiast, Nke a bụ ịtụnanya atụmatụ. Ọ bụrụ na ị na-adịghị, 3D ga-emesị ghọọ ewu ewu otu ụbọchị. Dị ka onye ọzọ mmezi daashi, Video Converter Ultimate nwekwara tọghata video na 6x ngwa ngwa ọsọ site na-ewere zuru uru nke multi-isi processor na Intel Core, Nvidia Cuda, AMD teknụzụ. Mụta ihe banyere 2D ka 3D akakabarede.
Ajụjụ maka tost Windows
1. Ọ bụ a "tost" Ẹkot maka Windows 7?
N'aka. Ọ bụ ya mere isiokwu a na-ebipụta. Anyị na Wondershare ndammana nwere ike ikwu Video Converter Ultimate maka Windows isure DVD diski na Windows 8/7 / Vista / XP / 2000. Na ole na ole clicks, ị nwere ike ọkụ video na foto DVD maka play na ihe ọ bụla n'ụlọ DVD ọkpụkpọ.
2. Olee imeghe a tost faịlụ na Windows 7?
Ị nwere ike na-agbalị na-agbanwe agbanwe filename ndọtị na * .iso na-ahụ ma ọ bụrụ na n'elu tost maka Windows ga-emeghe ya. Kara gị mma ka a oyiri nke mbụ faịlụ n'ihu gị nyegharịa it.Since tost na-arụ ọrụ na Mac, ụzọ kasị mma na-emeghe a tost faịlụ bụ iji tost site Roxio.
Smart Ntụgharị Pro Alternative maka Windows: More Advanced, Faster na Mfe
Olee otú Gbanwee Data si iPhone ka Windows Phone
Olee otú Detuo Windows 7 Site na otu Draịvụ ka ọzọ